Lego Batman 76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား! ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
15 / 08 / 2020 18 / 08 / 2020 ရော့ Paton 1648 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား, Batman, Lego, Lego 4+, Lego Batman, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, ပင်ဂွင်း
အစုတခုအနေဖြင့်၊ 76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား! သင့်ရဲ့ချဲ့ထွင်မည်မဟုတ် Lego Batman မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း, ဒါပေမယ့်ဒါဟာတကယ်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ် ...
theme: Batman စျေးနှုန်း: £ 8.99 / $ 9.99 / € 9.74 အပိုင်းပိုင်း: 54 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီ၏အဓိကတည်ဆောက်မှုသို့ပြန်လည်နေရာချထားရန်အငယ်တန်းမှအမည်ပြောင်းထားသော ၄ စုံအစုံသည်ထိမှန်ပြီးလွဲချော်သွားသည်။ Lego အုပ်စု၏တန်းစီဇယား။ ၎င်းတို့ကို Duplo မှဘွဲ့ရပြီးနောက်တည်ဆောက်သူများ၏အတွေ့အကြုံအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များနှင့်အပိုင်းအစများသည်အရေအတွက်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုအကန့်အသတ်ရှိသည်။ သူတို့အသစ်တွေ Lego သင်တို့နှင့်ငါအဘို့မဟုတ်, အစုံပေမယ့်
76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား! ဒီမော်ဒယ်လ်နှစ်ခုကိုငါးမိနစ်ထက်မပိုသောတည်ဆောက်မှုဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကသူတို့လုံးဝမေ့လို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ် ဦး စလုံးဟာအရင်ကမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့၊ ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အဖြစ် Lego အစုံ, သူတို့ကကန ဦး စှဲကျော်လွန်။ မရွှေ့ကြဘူး။
တစ်ခုမှာ Lego Group သည်ရောင်းအားကိုအားပေးရန်အတွက်အစုံလိုက် (၄) စုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတို့ထဲ၌သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပင် Penguin သည်ပိုမိုတောက်ပသည့် - အမှန်တကယ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောခံစားမှု - ဆိုလျှင် - ဝတ်စုံကိုပေါ်ထွက်လာသည်။ Batman Cape ဒီဇိုင်းသစ်မှအပမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအမျိုးမျိုးသောအစုံများတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအငူ p အဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်art ၏ 2020 အကွာအဝေး၏ Lego Batman အစုံ။ ပိုစျေးကြီးသည် 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း - ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ် - နှင့် 76159 Joker's Trike Chase နှစ်ခုလုံးတွင်ဒီဇိုင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည် 76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား! ရုံတစ်ခုအသစ်တစ်ခုကိုရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည် Batman သေးငယ်သောရုပ်ပုံအသေးစားသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်း၎င်းတွင်လျှောက်ထားရာတွင်၎င်း p ရှိသော်လည်းမပြောင်းလဲပါartသူ၏နောက်ကျောမှဝေးကွာလွန်းသောကြောင့်ထိုင်ရန်အလိုရှိခြင်းအတွက်သူသို့မဟုတ်နောက်ကွယ်မှလဲကျရန်ရှည်လျားလွန်းနေစဉ် (သူကမတ်တပ်ရပ်နိုင်) များအတွက် icular ကိစ္စတွင်။
ပိုမိုစျေးကြီးသောပစ္စည်းများတွင်ပါ ၀ င်သောအခြားဒီဇိုင်းမှာပိုမိုကောင်းမွန်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အတွဲသည် ၇၆၁၅၈ တွင်ထည့်သွင်းသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းသည်ရှက်စရာဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ခက်ခဲသွားပြီနေတုန်း 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း ၎င်း၏ရိုးရှင်းသည်city၇၆၁၅၉ Joker's Trike Chase အတွက်ပေါင် ၈.၉၉ နှင့် ၄+ အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် Lego တည်ဆောက်သူများ၊ စနစ်တကျစိစစ်ရန်အနည်းငယ်သာရှိသည် 76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား! အဘို့။ တည်ဆောက်သူများနှင့်လူငယ်ဆောက်လုပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။
76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား! မှာမှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← အတွင်းပိုင်းရှိ Lego ဒိုင်နိုဆောသွားဘက်ဆိုင်ရာ LEGOLAND preview
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: အသေးစားအရုပ်ပင်လယ်ဓားပြ →